Farshaxanka Uzungöl ee laga arko gaariga | Kabtanka baabuurta - Wargeyska baabuurta
HomeTURKEYGobolka Banaadir61 TrabzonUzungolun Beauty ayaa laga arki doonaa Cable-ka cable baabuur
12 / 11 / 2012 61 Trabzon, GUUD, TELPHER
Degmada Uzungöl, ayaa bilowday in lagu shaqeeyo qalabka telefoonka ee loo qorsheeyay in lagu dhiso 2 kun 403 khadka dhexe ee Haldizen Creek iyo Sarıkaya Hill.
Tuğba xigeenka Masar - xarumaha Turkey ee ugu muhiimsan dalxiiska Uzungöl 'sidoo kale, on abuuritaanka 2 403 line kun oo mitir u dhexeeya Haldizen Creek iyo Sarikaya Tepe ayaa bilaabay in ay u shaqeeyaan baabuur cable la qorsheeyay.
Dalxiisayaashu waxay awoodaan inay arkaan Uzungol iyo quruxda gaarka ah ee hareeraha ku hareeraysan ee shimbirta aragtida indhaha, taas oo ay ugu wacan tahay baabuurta fiilada, kaas oo la qorsheeyay in la helo bilaha xagaaga sanadka soo socda.
Waa guddoomiyaha guddida shirkad ka shaqeysa Imaaraadka Carabta. Necdet Kerem iyo ganacsadaha Trabzon Sukru Fettahoglu 15 oo la aasaasay Bishii Oktoobar by shirkadda Uzungol Teleferik Iskaashatada Ganacsiga iyo Tamarta Ganacsiga Ganacsiga, Trabzon, Degmada Caykara ee magaalada Millennium 2 kun 403 si ay u shaqeeyaan fulinta mashruuca ayaa bilaabay inuu fuliyo.
lammaanahaaga shirkadda ee Sukru Fettahoğlu, AA ku yiri hadal uu u sheegay suxufiyiinta, baabuur cable ee dunida qaybta aad u horumarsan ee Turkey ayaa sheegay in horumar in ku filan weli, mid ka mid ah wiishashka ski yar ee Turkey ayaa sheegay in ay sameeyn lahaa Uzungöl'e.
Fettahoglu ayaa sheegay in ujeedadooda ay tahay in ay sameeyaan baabuur telefoon ah oo ku yaalla Uzungöl si ay u bixiyaan jahwareer la'aanta iyo dabeecadda cajiibka ah ee Badda Badda ee adeegga dadwaynaha.
"Gaariga fiilada wuxuu bilaabi doonaa meesha ay HNALX loo yaqaano Haroskom oo ka soo baxaysa bartamaha Uzungöl, 3, iyo saldhigga labaad waxaa lagu dhisi doonaa Meshebasi halkaasoo xarunta labaad ee 970 la dhisi doono. Laga soo bilaabo halkan, waxaan gaadhi doonaa Sarikaya Hill oo leh meel sare 2 kun 403, halkaas oo saldhigga saddexaad loo abuuri doono. "
Fettahoglu ayaa sharaxay in ay qorsheynayaan inay u adeegaan dalxiisayaasha xilliga kulaylaha iyo xilliyada jiilaalka iyada oo mashruucan oo ay ka mid tahay xarumaha bulshada ee laga heli doono saldhig kasta oo leh, "Waxaan leenahay goobo casri ah oo aad u wanaagsan oo diyaar u ah adeeggan halkan qaboobaha. XAGTA 400 ayaa diyaar ah xilliga jiilaalka. Dooxooyinka ka dambeeya saldhigga saddexaad, waxaa jira goobo diyaarsan. Kuwani waa meelaha horay loo soo bartay, oo barashada barafka la sameeyay iyo lagu heshiiyey tayada, dhumucdiisnaanta iyo adkaysiga barafka. "
Fettahoge waxa uu carrabka ku adkeeyay in qiyaastii hal milyan oo qof ay soo booqdaan Uzungöl sanad walba waxayna sii wataan:
Uz Marka markii gaariga la dhiso, tirada booqashada ee Uzungöl waxay kordhin doontaa 50, 60. Xarumo badan oo dalxiis ayaa lagu dhisi doonaa tuulada Plati oo ku taal dooxada Uzungöl iyo meelaha qulqulka leh. Maadaama aysan ku filneyn. Nasiib darro, gobolkayagu waa mid cidhiidhi ah marka la eego dhaqdhaqaaqyada dalxiiska, laakiin aagga waa mid aad u ballaaran. Uzungöl kuma koobna harada iyo hareeraheeda. Uzungöl waa degaan dhamaystiran oo ka timaada Karakaya, Buutaneed Mountain to Kaçkar Mountains. Dhulkaan waxaan haynaa harooyin aad u qurux badan, dhulgariiryo, buuro iyo xitaa goobo fara badan illaa xajmiga kubadda cagta. Waxaan qorsheyneynaa inaanu sameyno waxqabadyo badan oo ka jira aaggan. Tani waa habka kaliya ee lagu hagaajinayo dalxiiska. Bariga Dhexe, gaar ahaan Dunida Carabta, ayaa aad u xiiseynaya dalxiiska jiilaalka. Sababtoo ah ma joogaan, way ku faraxsan yihiin marka ay halkaan joogaan. Waxaan samaynay daraasado ku salaysan oo aan ku daba galinno maalgashi faa'iido leh. Lamaanahaygu wuxuu leeyahay shirkad xoog leh. Marnaba wax dhibaato ah malahan. "
- "Miyaynu ku arki doonnaa malaayiin qof oo buurahaas ah" -
Fettahoğlu, daraasaadka dabiiciga ah iyo geedaha ayaa bilaabay inay go'aamiyaan dhererka daraasaddaha, ayuu yiri: "Waxaan qorsheyneynaa inaan dhameystirno habraaca xafiisyada xiliga qaboobaha. Guga, kulankan maaddada laga soo saari doono Yurub iyo halkaan ku iman doona baakadaha ayaa bilaabi doona. Hadafkayagu waa inaanu u furanno baabuurta fiilada si aan ugu adeegno ugu yaraan Juun, ugu badnaan Luuliyo, ugu yaraan si ay u dhaqaajiyaan suunka socodka. Dhammaan xarumaha bulshada ma kobcin doonaan, laakiin sannad gudaheed waxay noqon doontaa goob dhammaystiran. "
Sida laga soo xigtay xisaabinta bilawga ah ee mashruuca qarashka 20 million pounds, Fettahogl ayaa yiri, "Ma heysano dalab dhaqaale oo ka yimaada dawladda. Mashruucan waxaa lagu fuliyaa hoggaanka iyo ilaalinta Mr. Erdogan Bayraktar, Wasiirka Deegaanka iyo Magaaleynta, iyo Gudoomiyaha Trabzon Recep Kızılcık. Waxay ku faraxsan yihiin sida aan nahay. Waxay ballan-qaadeen in caqabadaha oo dhan laga adkaan doono oo ay ka caawin doonaan arrinta arin-galka. Waxaannu qaadnay waddadani ku tiirsanahay waddankeena, "ayuu yiri.
Fettahoglu wuxuu sheegay in qofka qaadan doona qalabka telefoonka uu ka arki doono Uzungöl iyo dooxada Uzungöl markii mitirka 500 uu kor u kaco:
"Soo booqdayaasha waxay u kici doonaan tuulada Mesebasi iyagoo daawanaya Haldizen Creek Valley, Multat Valley iyo Plati Valley. Halkan, waxaad u fariisan doontaa Uzungöl cagihiisa, cabi shaah, kafeega, cuntada iyo caafimaadka waxay heli doonaan cunto. Laga soo bilaabo halkan waxay u fuuli doonaan buuraha, Sarikaya Hill, ugu dambayntii ugu sarraysa. Meelahan, masaafada shimbiraha ee 20 ayaa laga arki karaa. Waxaan ku jirnaa bartamaha dooxada 22. 015-005 Kanna (Quraanku) waa aragti (sida qaddariya) ood u oodso Wanaagga kana Jeedso Wajigooda Dartiis
Shukrut Fettahoglu, 277 dadka ka qaybqaatay cilmi baaritaan ayagoo fiirinaya dareenka, Ujeedada Dadka Uzungöl 'Waxaan ku waydiinay haddii aad raaci lahayd gaari telefishan. Kaliya 277 dadka ka socda 30'u 'cabsida dhererka, ma fuulayno' waxay dhaheen. Qof kasta oo yimaada dooxadani wuxuu helayaa baabuurkan fiilada ah. Ma dooneyno inaan wax sameyno, laakiin tani waa ganacsi faa'iido leh. Waan jeclahay xiisaha, xitaa naanaysta nambarku waa turjumaad Turk ah. Waxaanu ku arki doonaa hal malyan oo qof oo buurahaas ah. "
Dhaawaca Bloodthirsty ee Uzungol
Uzungöl in laga eego gaariga telefoonka
Qurxinta quruxda badan ee deggan Istanbul: Haydarpaşa Station
Gaadiidka BUREGAS iyo Inegol ayaa laga wada hadlay
Dhibaatada gaadiidka ee Inegöl ma lagu xalin doonaa?
Dhibaatooyinka, 100 Lost Train Train Laga Helay Goobta Dhulka (Video)
Ankara waa in lagu dhejiyaa khadadka fiilooyinka
Meram Ties waa in la daryeebaa ka hor inta uusan gaariga wata
Doolow laga bilaabo kor u qaadista masawirka (Video)
Ka boodida gaadhiga
KETOB iyo Olympos Cable Carab
Qolka hudheelka oo ka yimid baabuurta telefoonka 2.8 km (Sawir Sawir)
Ganacsade Trabzon Sukru Fettahoglu
Shirkadda Ganacsiga ee Tamungol Teleferik Dalxiis iyo Shirkadda Tamarta Ganacsiga
Haydarpashaport iyo Galataport
Gaadiidka basaska iyo taraamyada Konya ayaa la cusbooneysiiyaa